Uyifaka njani i-GNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04 | Ubunlog
UPablo Aparicio | | gnome
NgoLwesine odlulileyo, umhla wamashumi amabini ananye ku-Epreli, Ubuntu nazo zonke iincasa zaseburhulumenteni zaziswa ngokusesikweni. Njengoko nisazi nonke, uhlobo oluqhelekileyo loBuntu lusebenzisa imeko yemizobo yeCanonical Unity. Nangona ndingenakuthi andiyithandi kakhulu, ndiyabaqonda bonke abo bakhetha enye indawo yemizobo, into ethi, enyanisweni, ikwayimeko yam, ndikhetha ukuba ngu-Ubuntu MATE. Nangona imeko yemizobo ngokubanzi ibizwa ngokuba yiUmanyano, Ubuntu busebenzisa usetyenziso oluninzi ngomnxibelelanisi womsebenzisi we-GNOME kwaye kweli nqaku siza kukufundisa uyifaka njani i-GNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04.
Ubuntu 16.04 isebenzisa i-GNOME 3.18 ubukhulu becala: I-GTK 3.18 ecaleni kwe-GNOME Shell 3.18, GM 3.18 kunye ne-GNOME 3.18.x yezicelo ezininzi. Olunye ukhetho ngumphathi wefestile weNautilus osetyenziswe yiGNOME 3.14 kunye IZiko leSoftware kunye neKhalenda yeGNOME esele isebenzisa i-GNOME 3.20.x. Ukuba ufuna ukuvuselela kangangoko kunokwenzeka kuhlobo lwamva nje, kufuneka uqhubeke ufunda.
1 Faka iGNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04
2 Ungabuyela njani kwi-GNOME 3.18
Faka iGNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04
Ukufaka i-GNOME 3.20 Kuya kufuneka usebenzise indawo ekugcinwa kuyo i-GNOME 3. Gcina ukhumbula ukuba le ndawo yokugcina izinto ayinayo yonke into ihlaziyiwe okwangoku, kodwa izicelo ezinje ngeTshizi, iEpiphany, iEvince, iDisco kunye nezinye zinjalo. I-Nautilus, iGedit, iimephu, ukujonga inkqubo, iTheminali, i-GTK +, iZiko loLawulo, i-GNOME Shell kunye ne-GDM zonke zihlaziywa kuhlobo lwe-3.20.
Ukufaka i-GNOME 3.20 kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Sivula i-terminal kwaye sibhala le miyalelo ilandelayo:
Ngaphambi kokuqinisekisa, Kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba iiphakheji eziza kuphelisa akukho nanye exhomekeke kuthi.
Nangona ungangena kwindawo entsha yemizobo ngokuphuma kunye nokukhetha entsha kwiscreen sokungena, kungcono ukuqala kwakhona kwaye ukhethe imeko entsha.
Ungabuyela njani kwi-GNOME 3.18
Ukuba asiyithandi into esiyibonayo okanye kukho into engenziwanga ngokuchanekileyo, rhoqo singabuyela umva. Ukwenza oku, siya kuvula i-terminal kwaye sibhale lo myalelo ulandelayo:
Gcina ukhumbula oko besikuthethile ngaphambili: sinokubuyela kwi-GNOME 3.18, kodwa Iipakeji esizisusileyo (ukuba zikhona) xa ufaka i-GNOME 3.20 azizukuphinda zifakwe. Ezo phakheji kuya kufuneka ziphinde zifakwe ngesandla.
Ngaba ukwazile ukufaka indawo yemizobo yeGNOME 3.20 kwi-Ubuntu? Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » Uyifaka njani i-GNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04
Ndingalujika njani olu hlaziyo?
Ndingayenza njani i-gnome isebenze kum? sebenzisa imigca yokuyalela kodwa i-gnome ayisetyenziswanga
Ntsikelelo (@ntsiki) sitsho
qala nje kwaye ngaphambi kokungena ngegama lomsebenzisi luphawu lomanyano, cofa apho kwaye ukhethe i-gnome, beka igama eligqithisiweyo kunye ne-voila uya kuba kwindawo ye-gnome
Phendula kwi-Fr3d0 (@fredorogo)
UDouglas Roos sitsho
Kwimeko yam bendiphucula ukusuka kwi-14.04 kwaye xa ndandifaka iGnome 3.20 i-Unity icon ayibonanga ecaleni kwegama lomsebenzisi ke kuye kwafuneka ndenze oku kulandelayo:
Sudo apt-fumana ukufaka i-gdm
Xa isikrini soqwalaselo sivela khetha i-lightdm nasemva kokumisela ukuqala kwakhona. Oku kuyakubonisa uphawu lobumbano kunye neGnome kwiscreen sokungena.
Phendula kuDouglas Roos
ULeon S. sitsho
Andilufumananga olu hlobo lwendawo enomdla.
Phendula kuLeon S.
IsiFrentshi uG sitsho
Ndiyenzile imiyalelo kwaye emva koko, indenze ndakhetha phakathi kwe-lightdm kunye ne-gdm, endikhethe kuyo eyesibini, emva koko ndishiya imvelaphi yedesktop kunye nezinye izinto ezibonakalayo zomanyano, ezinje ngemida yamaqhosha, umbala kuwo amaqhosha ayatshintsha xa njl. kukhethwe kwaye xa uyiqala kwakhona ihlala kwiscreen esimfusa kunye ne-logo ye-ubuntu kunye namachaphaza eorenji apha ngezantsi kwaye ayenzeki
Phendula uFrancsico G
Ndiyifakile kwaye xa ndingena kwi-lightdm (ayindinikanga enye indlela) ukuba ndizama ukukhetha enye indlela engeyiyo eyokungagqibeki iyakuwela kwaye emva kwethutyana isikrini sibe mfusa.
Ukuba ndingenise ukhetho olungagqibekanga, into efanayo yenzekile kuFrancisco G. Imvelaphi yedesktop imkile, watshintsha iifonti kwaye iifestile zazilahlekile kwimisebenzi emininzi, ngaphandle koko wabeka ii icon kwi-150%, ngenxa yokuba ndingakholwanga nantoni na yayo nantoni na ndibuyele kuhlobo 3.18.5 ebendinalo kude kube lelo xesha
UJonathan Fuentes sitsho
Abahlobo abalungileyo, kwenzeka into efanayo kum njengoFrancisco G kwaye, andibuthandi ubunye kwaye ndikhetha imeko ye-gnome, ungandinceda ukusombulula le ngxaki?
Phendula kuJonathan Fuentes
Ndizamile ukufaka i-gnome kodwa xa ndiqala kwakhona isikrini sihamba mnyama kwaye akwenzeki. mnyama ngokupheleleyo, ngaphandle kokufuna iphasiwedi okanye nantoni na. mnyama ngokupheleleyo
Kwenzeka into efanayo kum njengaye wonke umntu ... puuufff lonke ubumbeko lobumbano lwalahleka.
Ndiyenza njani imiyalelo eyahlukeneyo?
Ukuba uyayithanda i-GNOME-njengoko kunjalo-sebenzisa Ubuntu GNOME. Inguqulelo esemthethweni (okanye incasa) yobuntu ezisa i-GNOME njenge-desktop emiselweyo .. Ndiyabulisa
Ndicinga ukuba kukho into engalunganga kwesi sikhokelo, ayiveli kwaye andisifumani. Deisntale kuye ukuba ajonge kwenye indawo. Enkosi ke siyafunda
kubi kakhulu .. oku akusebenzi .. Ndiyilungisa ngendlela engeyiyo yonke ii-icon ezinkulu, ayibonisi ukwahlulahlula ukhetho lweemenyu, okanye i-fart ukuze sifunde @Pablo Aparicio uzinikele kwenye into ongayenziyo njengebhlog.
UPierre Henri sitsho
Ndiyifakile kwaye andinakukhetha imeko ye-gnome. Xa ucofa ingozi kwaye kufuneka ndibuyisele kubumbano.
Kwaye ngoku ungayikhupha njani le m… e
Phendula u-Pierre Henri
USamuel Lopez Lopez sitsho
Sudo apt ukufaka i-ppa-purge && sudo ppa-purge ppa: gnome3-iqela / gnome3-ukubeka
sudo ufumane-phucula uphuculo
okanye emva komgca wokuqala wokuyalela uye kumphathi wohlaziyo kunye nohlaziyo
Phendula uSamuel López López
Faka isicelo somgca wokuyalela, uqalise umatshini amatyeli aliqela kwaye andilufumani uphawu lobumbano lokutshintshela kwi-GNOME.
Into eyenzekileyo kukuba i-desktop kunye ne-icon ye-browser ibonakala inkulu.
Ndizenza zincinci njani?
khange indincede ... kodwa enkosi